सिरप मा Sade - असल खाना र नुस्खा
Lingonberry एक सदाबहार प्रजाति गर्न भन्छिन् जो एउटा सानो shrub छ। यो बोट को जामुन कारण cranberries असामान्य संरचना गर्न, ऊर्जा प्रयोग एक अविश्वसनीय शुल्क दिन्छ र। तिनीहरूले प्राकृतिक शर्करा, भिटामिन, catechins, pectins, खनिज, anthocyanins र समावेश टेन्निसको।
को बेरी नै फरक एसिड धेरै समावेश गर्छ, र तिनीहरूले cranberries दिनु अमिलो स्वाद। र धन्यवाद Benzoic यौगिकों गर्न प्रकृति यी उपहार आफ्नो प्रकार र आफ्नो निहित गुण गुमाउने बिना लामो समय को लागि भण्डारण गर्न सकिन्छ।
यो बेरी देखि जाडो लागि तयारी सहित विभिन्न व्यञ्जन पकाउन। एक लाभदायक, सबै भन्दा सरल र व्यापक प्रयोग व्यञ्जनहरु को - सिरप मा cranberries। निस्सन्देह, अन्य विकल्प प्रशस्त छन्। तिनीहरूले बिरुवाहरु र पात र फूल प्रयोग गर्नुहोस्। Cranberries पनि genitourinary सिस्टम केही रोगहरु को उपचार मा प्रयोग गरिन्छ - decoctions को रूप मा।
Lingonberry सिरप अझै पनि उपयोगी गुण को संरक्षण विस्तार गर्ने छ यसको आफ्नै लाभ, छ। साथै, यो सिरप धेरै वयस्क र बच्चाहरु दुवै लागि, प्रयोग गर्न पकाउन सजिलो र रमाइलो छ। Cranberries, जो तपाईं यस लेखमा देख्न सक्नुहुन्छ फोटो, धेरै शक्तिशाली सुविधा छ। पनि Trichomonas, Giardia, staphylococci र अन्य रोगजनकों तिनीहरूलाई बीच: यो बलियो जीवाणुहरू र जीवाणुहरु सामना गर्न पदार्थ पाइन्छ। किन यो निको जामुन आधारित व्यञ्जनहरु को सबै प्रकार यति सक्रिय लोक चिकित्सा मा प्रयोग, र थप छ।
तर, यो आधारित यस्तो सकारात्मक गुणहरू, cranberries र तयारी बावजुद सावधानीपूर्वक खपत गर्नुपर्छ। विषाक्त, तर यो मात्र सम्भव अधिमात्रा छ - ती बलियो सामान, त्यसैले सक्रिय जीवाणुहरू लड्न कि, विपरीत प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने तथ्यलाई। निस्सन्देह, यो cranberries को सिरप गर्न हानि ल्याउन छैन। तर यस्तो पात को decoctions रूपमा लागूपदार्थ यो आधारित प्रयोग गर्नुपर्छ कडाई अनुसार यस तैयार मा सिफारिसहरू संग। लामो समयसम्म वा चिन्ह लगाइएको वाकवाकी बारम्बार प्रयोग भने, उल्टी, पखाला गर्न आग्रह, उपचार अस्थायी रूपमा बन्द हुनुपर्छ।
साधारण सिफारिसहरू तथ्यलाई समावेश उपचार हालको रोग र जीव को अन्य पुरानो अवस्था आधारमा, त्यसैले यस्तो वा दुई महिना रूपमा आउँछ, लिनु आवश्यक बीच, र त्यो। यो जडान, यो एक प्रारम्भिक परामर्श वा विशेषज्ञ चिकित्सक प्राप्त गर्न उचित छ।
Lingonberry सिरप निम्न नुस्खा अनुसार तयार पारे। किलोग्राम cranberries, चीनी को 300 ग्राम, पानी को 200 एमएल र एक कागति को रस लिन। जामुन, जानैपर्छ चिसो पानी चलिरहेको अन्तर्गत धुन र सफा ग्लास कन्टेनर मा बदलाव। यो सिरप तयार हुन्छ: एक हत्येदार बरतन मा,, पानी खन्याउन यो गर्न चीनी र कागति को रस थप्न एक फोडा गर्न ल्याउन र चीनी भंग नभएसम्म simmer। यो तल ठंडा पछि, यो, नाली गर्न त तिनीहरूलाई जामुन खन्याउन सम्भव छ। समाप्त उत्पादन को क्षमता चर्मपत्र द्वारा कवर, र सुतली संग गाँसिएको। यो कि ताजा cranberries को प्रयोग, यस नुस्खा मा स्थिर छैन सम्झना गर्नुपर्छ। एक टनिक रूपमा - जामुन जलसेक 1 चम्मच प्रति दिन2पटक प्रयोग गरेपछि एक सुन्दर, गाढा ठाउँमा भण्डारण सिरप।
सामन bellies - सबै अवसरका लागि पाँच व्यञ्जनहरु।
Kefir मा ओवन मा केक। kefir मा ओवन मा गोभी पाइ
Meatless बन्दागोभी बर्गर
अनाज पीठो - यो बाहिर पकाएको सकिन्छ कि?
ओवन मा धुनमा पाक्नु
ध्यान, ग्रील्ड चिकन! सबैभन्दा स्वादिष्ट व्यञ्जन लागि नुस्खा
के राम्रो केले। स्वादिष्ट केले: तला केले र केही थप विदेशी व्यञ्जनहरु
"Feokarpin": दबाइ खरीदार र डाक्टर बारेमा टिप्पणी। "Feokarpina" निर्देश को आवेदन मा
Pago Pago - संसारको अर्को दृश्य
होटल "तूफान", Lazarevskoye: तस्बिर र समीक्षा
अधिकार को बिल
एलसीडी "Sirius": समीक्षा धारकों, ठेगाना
PageTester: आय बारेमा समीक्षा
फाइबर आहार: कसरी सही बनाउने?
स्वादिष्ट र फ्लफी थियो कि एक आमलेट कसरी बनाउने
कसरी एक जोडी मा khinkali multivarka खाना पकाउनु?
अंग्रेजी मा Uncountable nouns। Countable र uncountable nouns